Nnukwu sdị Na-agbanwe N'ime Oge | Martech Zone
Nnukwu sdị Na-emetụta Oge
Monday, October 19, 2009 Tuesday, October 4, 2011 Bọọlụ Lorraine
Ahụrụ m mgbasa ozi Mac n'anya.
Imirikiti mmadụ na-eme, n'ihi na ha na-achị ọchị, na-enweghị iwe. Ha ebughi anyị nkọwa nke ngwaahịa, mana na 30 sekọnd ma ọ bụ obere, gbanwee maka ndị na-ege ha ntị, n'ihi na ha nwetara 'nri mgbu ahụ.'
Ka ị na-ele ha, ọ dị mfe iche na Mac na Apple n'ozuzu ha nwere nnukwu mgbasa ozi mgbe niile. Ma ngwa ngwa lee ụfọdụ n'ime ha anya mmalite mgbasa ozi, na-ekpughe eziokwu jọgburu onwe ya, na m na-ekwu jọrọ njọ. Apple malitere dị ka PC na oyiri nnukwu mgbasa ozi, na-ere atụmatụ kama uru.
1979 Adams Mgbasa Ozi Apple
N’ebe ụfọdụ n’ụzọ ha hụrụ, ha hụrụ olu ha na ọchị ọchị ha. Mgbasa ozi ndị mbụ ka dị obere "ederede arọ", mana site na 1979, ha amụtala ike nke ezigbo esemokwu na isi okwu dị ka ụzọ isi na-adọta uche anyị. Ka oge na-aga, mgbasa ozi ha na-ahụwanye nke ọma, nke bụkwa ezigbo ike nke ngwaahịa ha. Ha chọtara olu ha.
Ebumnuche maka azụmahịa ọ bụla bụ ịchọta olu ha. Dị anaghị amalite kpamkpam, ha na-agbanwe oge. Internetntanetị na mgbasa ozi mmekọrịta na-enye gị ohere iji mee ka mgbanwe evolushọn gị dị ngwa ma ọ bụrụ na ị na-agbanwe agbanwe n'ofe nyiwe. Ihe ịma aka bu imepụta ndi mmadu na-adighi nma, na ndi mmadu na Twitter ma obu ndi enyi gi, nke ndi mmadu kwadoro na ebe nrụọrụ weebụ gi na ndi ahia gi na mgbasa ozi.
Ma mgbe IBM na-ekwu na njedebe Mgbasa ozi ka anyị si mara ya Echere m na a ga-enwe ohere maka smart, na-etinye aka na mgbasa ozi nke a na-akwado site na smart na-ekere òkè ika.
Tags: ngwa ngwasụọ ngọngọWordPress
50,000,000 Kaadị Azụmaahịa!
Iji Animation na gị Email Marketing
Ọkt 20, 2009 na 11:23 AM
Ekwenyere m kpamkpam na edemede gị na mgbasa ozi mac bụ azụmaahịa, na-atọ ụtọ ma nwee ọchị nke nwere ike ịbụ isi ihe maka ezigbo mmepe.
Ọkt 20, 2009 na 5:39 PM
Ihe m hụrụ bụ ihe na-adọrọ mmasị gbasara mgbasa ozi Apple bụ na ha anaghị ere ngwaahịa ha. Ha na-agwa gị etu ngwaahịa nke ọzọ si dị njọ.
Ọkt 27, 2009 na 12:44 PM
Apple na-enyere ndị mmadụ aka ịnụ ihe mgbu wee nye azịza. Ọ ga-abụ echiche dị ize ndụ ma ọ bụrụ na mgbu ahụ abụghị ezigbo.